Wararka Maanta: Axad, Mar 22, 2020-Masuul katirsan Puntland oo caawo lagu dilay magaalada Gaalkacyo
Marxuumka ayaa kamid ahaa dhallinayarda firfircoon ee ka shaqeyn jiray horumarka iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. sidoo kale wuxuu ahaa ganacsade.
Markii ugu dambeysay ee uu kasoo muuqdo warbaahinta waxay ahayd afartii bishii February ee sanadkaan, isagoo xilligaas laga duubayay muuqaal uu kaga hadlayay shahaadooyinkii laga xanibay ardayda Puntland ee markii dambe la fasaxay.
Magaalada Gaalkacyo kuma cusba dilalka caynkaan oo kale ah. Bishii labaad ee isla sanadkaan, waxaa magaalada Gaalkacyo lagu dilay Cabdiraxmaan Nuur Geesdiir, oo ahaa nabaddoon iyo guddoomiye xaafad katirsan waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland.
Dilalka caynkaan ah waxaa inta badan sheegta ururka Alshabaab.